Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Software Problems » Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks]
1 Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 4th May 2010, 2:14 pm
ကျနော်အခု စိတ်တွေက နည်းနည်းရှုပ်ပြီးခေါင်းတွေလည်း ပူလာလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ဖို့ လုပ်ကြည့်နေတယ်... အဲဒါလေးကလည်း ပေ့ါမလိုနဲ့ ကျနော့်အတွက် သေးသေးလေးမဟုတ်ပြန်ဘူးဖြစ်နေတယ်... အဲဒါနဲ့ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းတော့ ခေါင်းရှုပ်မခံဘူးဆိုပြီး ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ခေါင်းရှုပ်ရအောင် ကျနော်ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ပြီဗျာ...
ထွေထွေထူးထူး ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး... ကျနော် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က Folder Locker 6.0 ကိုသုံးပြီး သူ့ရဲ့ Data တွေကိုသိမ်းထားတယ်... အဲဒါနဲ့ စကားစပ်ပြီးရင်းကနေ အဲဒါ မီးခံသေတ္တာ locker ကိုဖောက်ဖို့ အကြံရတယ်... အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်း သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်.. ငါမင်းဟာကိုဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ သူက အေးရရင်လုပ်ကြည့်လေတဲ့... အဲဒါနဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာ... အဲဒိမှာ ကျနော်လည်း software ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျော်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းမယ်ဆိုပြီးရှာလိုက်တော့
HAVE USED FOLDER LOCK6Before
experiece: NOT GOOD
but there'sasolution only for the files you protected with it and want to unprotect
it,this is not to uninstall FOLDER LOCK this is only to retrieve what you had thought
you lost that was very important
:: THIS ONLY PERTAINS to the FILES You Protected and want to UNPROTECT ::
1. Locate your file called LOCKER01.flk,LOCKER02.flk,LOCKER03.flk , ect ect
2. Copy Those Files toaThumb Drive or CD,DVD ect ect
3. Go to another PC or Laptop if you have one orafriend
4. Download Folder Lock6Trial from the official site to that computer and install it
5. Open Folder Lock6and Browse to Your Thumb Drive,CD,DVD ect
6. Locate the files LOCKER01.flk,LOCKER02.flk,LOCKER03.flk or what ever name you renamed your
... protected file and click on it.
7. Now Enter The Password you used to protect that file.
8. Open up everything inside and COPY and PASTE your folder or files onto an Unprotected surface
... on the Desktop or Thumb Drive....
... ** There you go you have now retrieve back your files... =0) **
... I Suggest DO NOT USE THIS PROGRAM if you have no idea what your doing
အဲဒိလိုရေးထားတာတွေ့တယ်... သူနဲ့တူတူစမ်းသပ်ကြတာပါ... မရဘူး... နောက်ထပ် regedit ကနေ password ကို remove လုပ်တယ်ဆိုလို့လည်း စမ်းကြည့်တယ်... မရဘူး... အခုကျနော်လည်း အပျော်လုပ်ရငး်ကနေ စိတ်ပါလာလို့လေ... ဟီး အခုထိတော့မရသေးဘူး... ကျနော်လညး် မွှေနေဆဲပါ... စတ်ပါရင် ကူပြီး စမ်းပေးကြပါဦးဗျ...
2 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 4th May 2010, 2:27 pm
Folder Locker 6.0 နဲ ့ပဲ Unlock ပြန်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောလား..
ဘယ်လိုသဘောလဲ ကို Mars
3 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 4th May 2010, 3:02 pm
everything inside and COPY and PASTE your folder or files onto an
ကို mars ရေ... လွဲနေတယ် ထင်တယ် နော်.........
7 and 8 အရတော့
ပေးထားတဲ့ password ကိုသိမှ လုပ်လို့ ရမှာနော်
ကျနော်ကပဲ ပိန်းတယ် ထင်တယ်
4 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 4th May 2010, 4:46 pm
solakoko wrote: သိပ်သဘောမပေါက်ဘူး..
ဟုတ်တယ် ကိုဆိုလာ.... အဲဒါကို မရနေတာ... ကျနော်တို့လိုချင်တာ pw ကိုမဟုတ်ဘူး... အဲဒိထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ data တွေကို ရရင်ပဲအောင်မြင်ပြီ...
ရှင်းပြဆိုတော့ ပြောရတာကောင်းဘူးဗျ ကို water တဖြစ်လဲ ရေ... ကျနော်လည်းအခုထိစမ်းလို့မရသေးဘူးလေ... အဲဒါကြောင့် ဒီနည်းနဲ့ကလည်း သေချာပေါက်ရမယ် ကျနော်မပြောတတ်ဘူး... စမ်းတုန်းဗျ... အဲဒါကြောင့် နညး်နည်းကလိချင်တဲ့သူတွေရှိရင် မရရတဲ့နည်းတွေနဲ့ ကျော်ကြည့်ရအောင်လို့ ခေါ်လိုက်တာ.... ဟဲဟဲ
5 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 4th May 2010, 5:19 pm
စမ်းကြည့်ဖို ့ကလဲ Folder Locker 6.0 ရှိမှ အဆင်ပြေမဲ့ပုံပဲဗျ...
အဲတာရှိမှ သူပြောသလိုဟုတ်မဟုတ် ထပ်စမ်းလို ့ရမှာဆိုတော့လေ..
ဘယ်သူတွေများ သိသေးလဲ မပြောတတ်
6 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 3:01 pm
Folder locker 6.0 လေးများရှိရင်တင်ပေးပါခင်ဗျာ... ကျနော်လညး်စမ်းသပ်ချင်လို့ပါ..
7 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 7:47 pm
ko htet wrote: Folder locker 6.0 လေးများရှိရင်တင်ပေးပါခင်ဗျာ... ကျနော်လညး်စမ်းသပ်ချင်လို့ပါ..
စမ်းချင်တယ်ပြောလို့ဝမ်းသာပါတယ်... အဲဒိဆော့ဝဲလ်က ဒီဖိုရမ်မှာရှိပါတယ်... အောက်ကလင့်မှာကြည့်လိုက်နော်...
8 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks] on 10th May 2010, 11:31 am
ကို Mars ရေ မသိလို့တခုလောက်မးမယ်နော်..6.0v တခုဘဲလား ကျန်တဲ့ version တွေကိုကောကျော်လို့မရဘူးလားဟင်..
9 Re: Folder Lock Password ကျော်ကြဦးမလားဗျို့ [Tips & Tricks]